नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भासिँदै गएका हामी र नासिँदै गएका हाम्रा सम्बन्धहरू !
भासिँदै गएका हामी र नासिँदै गएका हाम्रा सम्बन्धहरू !
अमेरिका बसेको पनि १४ वर्ष नाघेछ । अमेरिकामा होस वा नेपाल बाहिर अन्य कुनै पनि देशमा होस वा नेपालमै पनि किन नहोस्, म नजिक बाट नियाल्ने प्रयास गर्छु - नेपालीहरूमा यति बिघ्न स्वार्थी पन, कठोर मनको विकास हुँदै गएको छ कि यदि यही गतिमा जाने हो भने अबका केही वर्षमा छोराछोरीले आफ्नै बाउ आमा चिन्न छाड्ने छन् । चिनिहाले जस्तो अभिनय गरे पनि उनीहरूको आत्मामा बाउ आमा प्रतिको माया, अन्तर सम्बन्ध सबै सिसा जस्तै झर्‍याम झुरुम टुटेको हुने छ । आजले भोलि देखाउँछ । यो मैले नजिकबाट नियाली रहेको कहाली लाग्दो भोलिको तस्बिर हो ।
जब म अमेरिकाबाट सपरिवार नेपाल जान्छु, देख्छु अचम्मका परिघटना । अमेरिकामा भन्दा नेपालमा मैले झन् बढी विकृति र विसङ्गतिको पराकाष्ठा देखेँ । अधिकांश मान्छे सबै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक, स्मार्ट फोन प्रेमी भएका छन् । भेट हुँदा उनीहरू हाल खबर सोध्दैनन् बरु घर भित्र पस्न पाएको छैन वाई फाइको पासवर्ड सोध्छन् । भेट हुँदा आत्मीयता दर्शाउँदैनन । कसैलाई भेट गर्न घरमा गयो घरका हरेक परिवारजन फोनमा लिसो टाँसिएझैँ टाँसिरहेका, फोनको स्क्रिन हरेर बहुलाहा झैँ एक्लै हाँसिरहेका देखिन्छन ।
मलाई लाग्यो - आफन्तजन, नाता सम्बन्ध, आफ्नो पन, व्यावहारिकता, हार्दिकता सबै कुरा हामीले आर्यघाटमा लगेर पोलिसकेछौँ ।
त्यति मात्र होइन अझ खतरनाक कुरा मैले यो देखेँ अनुभव गरेँ कि - श्रीमानलाई श्रीमती, श्रीमतीलाई श्रीमान् भए पुग्ने, आफूले जन्माएको छोरो र बुहारी, छोरी र ज्वाइँ मात्र आफ्ना । अरू सबै पराया जस्तो देखाउने चलनको ठुलो विकास नै भएछ हाम्रो नेपाली समाजमा ।
यदि हामी सबैले माथिका कुरा मनन गरेनौँ र सच्चिएनौँ भने सम्झिनुस् हामी सबै आफन्तजन, नाता सम्बन्ध, आफ्नो पन मात्र होइन हामी आफै पनि यी कुराहरू सँगै सकिने र सकाउने बाटोमा छौँ । सत्य तितो हुन्छ । चेतना भया !
Basudev Neupane March 25, 2021 at 9:51 AM
एउटा कटु सत्य के हो भने हामी नेपालीहरु ले धेरै जसो बिकृतिहरु बिदेशीहरु बाट सिक्छौँ,तर राम्रा कुराहरु सिक्न रुचाउँदैनौ! नेपालमा मानिसहरू अझै मसिन भैसकेका छैनन्! धेरै अझै जिवन्त नै छन!तर युरोप र अमेरिकामा जिवन्त मानिको संख्या घट्दो छ , हो त्यसको असर याहाँ पनि देखिएको छ! चुरो कुरो के हो भने तपाईं जस्ता कलाकारहरू बस्ने देश चै अमेरिका पक्कै होईन!!!
एउटा कटु सत्य के हो भने हामी नेपालीहरु ले धेरै जसो बिकृतिहरु बिदेशीहरु बाट सिक्छौँ,तर राम्रा कुराहरु सिक्न रुचाउँदैनौ! नेपालमा मानिसहरू अझै मसिन भैसकेका छैनन्! धेरै अझै जिवन्त नै छन!तर युरोप र अमेरिकामा जिवन्त मानिको संख्या घट्दो छ , हो त्यसको याहाँ पनि देखिएको छ! चुरो कुरो के हो भने तपाईं जस्ता कलाकारहरू बस्ने देश चै अमेरिका पक्कै होईन!!!